Izindaba - Amandla Amandla
Ucwaningo lobuchwepheshe nentuthuko
I-Yiting inethimba le-R & D eliqinile futhi yethula ubuchwepheshe bokukhipha uthuli obuthuthuke kakhulu emhlabeni.
Uhlelo lonke lisebenzisa uhlelo lokulawula i-Siemens oluhlakaniphile futhi lungashintsha uhlelo nemishini yokulungisa amaphutha ukude.Ingalawula kahle futhi ikhumbuze ukugcinwa okudingekayo kanye nezingxenye zokhiye zokudluliswa kokudluliswa
uhlelo. Ingaxhunyaniswa ne-MES noma enye isoftware yokuphatha yokusebenza okukude nokufakwa kwesistimu. Fingqa inkinga evela njalo ngenyanga bese uyithumela ebhokisini leposi elibekiwe.
Ngenxa yezidingo zentuthuko zesikhathi esizayo zamabhizinisi efenisha, ushintsho lwesakhiwo sokuqala njengokwanda kwemishini, ukushintshwa kwemishini noma izidingo zokufuduswa kwezitshalo. Uhlelo lwethu lokuvikelwa kwemvelo lungangezwa ngokuthanda ngokuya ngezidingo zoqobo zamakhasimende.
Uhlelo lokuvikelwa kwemvelo lwethula ukutholwa kwenhlansi ne-Sprinkler esezingeni eliphakeme laseJalimane, futhi lisebenzisa ochwepheshe ukuyiklama nokuyihlola, okuqinisekisa ukuphepha kohlelo lokuvikela imvelo i-Yiting.
I-Yiting inethimba elinamandla ngemuva kokuthengisa ukukunikeza ngensizakalo esheshayo futhi efike ngesikhathi, ukuze ungabi nazinkathazo.
Ukuqashwa kwesikhathi sangempela kokuhlushwa kokuthululwa kothuli, ukutholwa kwengcindezi yokuhlunga, ukutholwa kwesikhwama sendwangu, ukungena nokungena komoya nokucindezela kokugeleza ukuqinisekisa ukuthi noma iyiphi indawo yokulawula ingaphakathi kwebanga elibekiwe.
Futhi qinisekisa ukuthi ingaxhunywa ngqo kukhompyutha nakwesinye isoftware yokuphatha, iqoqe ngokuzenzakalela idatha yanyangazonke.
Ukuvikelwa kwemvelo nokongiwa kwamandla
Ivolumu yomoya ehlukile, ukutholwa kwengcindezi yomoya, nokuqapha ukusetshenziswa kwalo lonke ivolumu yomoya yobuchwepheshe obunembile bokulawula imvamisa. Ingakwazi ukuzivumelanisa kahle nokufunwayo ngokuya ngenani lokusetshenziswa, futhi ukonga amandla kungaphezu kwama-30%.
I-Yiting inethimba lebhizinisi lemakethe elizwakalayo lokuqoqa imininingwane yakamuva yezimakethe nganoma yisiphi isikhathi, futhi limboze umhlaba wonke.
Sizibophezele ekwakheni ubudlelwano obunqobayo namakhasimende, sisize amakhasimende athuthukise inani lawo ngobuchwepheshe bethu bokuvikela imvelo obuthuthukile kanye namandla we-R & D. Asigcini ngokunikeza amakhasimende imikhiqizo yokuncintisana, kodwa futhi nokusiza amakhasimende ukuthi afinyelele ezinzuzweni zezindleko. Sinikeza isisombululo esibanzi ngenkonzo yenkampani yami evuthiwe yokumisa ikhasimende elilodwa.
Siyaqhubeka nokusungula ukuzuza ukwethenjwa kwamakhasimende, ngaphezu kwezidingo zamakhasimende. Abameli be-YiTing "Imikhiqizo nezinsizakalo ezintathu ezinhle nezilungile". Ubuchwepheshe obuhle bobunjiniyela, ukulawula okuhle kokulethwa, ikhwalithi yokufaka enhle, intengo efanelekile.
Ngithanda ukubonga uhlu oluhamba phambili ngokubambisana kwamakhasimende, hhayi amakhasimende abhalwe ohlwini nawo abonga ngokujulile, sizoqhubeka nokuqhubekela phambili ngokuzayo ...